Inverter Pool saar
Doorsoome Speed Pool bamka
Damaanad & Service Siyaasadaha
iSAVER + waa Converter ugu horeysay screen taabto inta jeer in industry balliga, wax soo saarka ka ah dadaal our ee doonaya abuurnimo joogto ah si ay u siiyaan waayo-aragnimo ah oo macaamiisha ka wanaagsan.
Bamka, isagoo user ugu weyn ee keli ah ee korontada la deggan yahay, ma aha oo kaliya gubtay, tamarta ma loo baahan yahay, laakiin sidoo kale abuuraa sanqadh joogto ah taas oo sida caadiga ah ka sarreeya 60, mararka qaar xitaa ilaa 70 DBA. iSAVER + inverter bamka pool waa xalka ugu fiican ee badbaado tamarta iyo orodka xasilloon.
Iyada oo shaqo saacad, waxaad sidoo kale la socon kartaa bamka ee xawaare joogto ah, ama qarka u saaran inay 4 shidda hawlgalka maalin kasta, mid kasta oo la xawaaraha gaar ah. Iyadoo 80% badbaadiyey xawaare yar yahay, xitaa haddii ay ordaya 24 saacadood maalintii xawaare yar, weli aad bixiso in ka yar. A reading isticmaalka awoodda bandhigay idin siiyo fikrad ah sida inta badan tamarta bamka la isticmaalayo hoos xawaaraha kala duwan.
Easy kor u badbaadiyo in 80% xawaare yar yahay
heerka Sound ee bamka la dhimay 25%
shidda Optional haboon codsiyada kala duwan
waxqabadka sifeynta Better xawaare hoose, kiimikada yar ee loo baahan yahay
A taako nolosha dheer motor iyo qalabka kale ee pool
kaalin weyn ku yaraynta GHG
Qiimaha xal wax ku ool ah
Waxay ku xiran tahay kiiska shakhsi, bixiso dib markii ay noqon kartaa in ka yar 12 bilood. Halkan hoose waa xisaab si adag inta aad ku badbaadin karto sano ah iSAVER ah + inverter dabaasha bamka lagu rakibay.
Reeraha leh berked dabaal 50m³ ah sida caadiga ah ku qalabeysan 1HP (0.746kW aqbasho) bamka balli.
In xilli dabaasha toddoba bilood ah, kharashka sanadkiiba € 752 Ka dib markii rakibidda iSAVER ah + inverter nidaamka, kharashka sanadkiiba € 169
Savings Annual = € 583
- Dabaasha Pool saar Inverter
- Speed ​​variable Pool saar Saacad
model iSAVER + 1100 iSAVER + 2200 iSAVER + 1100C iSAVER + 2200C
Power Input 1ph AC 1ph AC 1ph AC 1ph AC
danab Input 220V ~ 240V 220V ~ 240V 220V ~ 240V 220V ~ 240V
danab Output 1ph, 0 ~ 240V 1ph, 0 ~ 240V 3ph, 0 ~ 240V 3ph, 0 ~ 240V
Power Output Max 1 kw Max 2.2kW Max 1kW Max 2.2kW
Output hadda Max 5.5A Max 12a Max 4A Max 8A
Rating lifaaqan IP65 IP65 IP65 IP65
bamka Nooca wajiga Single wajiga Single saddex wajiga saddex wajiga
qaboojinta by hawada
Range Speed 1200 ~ 2900rpm
Ku biir Our Global Network of qaybiya!